မြို့ပြ အင်ဂျင်နီယာ ဘာသာရပ် - ဝီကီပီးဒီးယား
၁.၁ မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာပညာရပ်လုပ်ငန်း သမိုင်းကြောင်း
၁.၂ မြို့ပြ အင်ဂျင်နီယာ ဘာသာရပ်၏ သမိုင်းကြောင်း
၁၈၁၈ ခုနှစ်တွင် (ယနေ့ခေတ် ထင်ရှားသော) မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာများအဖွဲ့ကို လန်ဒန်မြို့တွင် တည်ထောင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ကြပြီး၊ ၁၈၂ဝ တွင် ထင်ရှားကျော်ကြားသည့် အင်ဂျင်နီယာ သောမတ်စ် တဲယ်လ်ဖို့ဒ် က ၎င်းအဖွဲ့အစည်း၏ ပထမဦးဆုံးဥက္ကဋ္ဌဖြစ်လာခဲ့သည်။ အဖွဲ့ကြီးသည် တော်ဝင်ခွင့်ပြုချက်ကို ၁၈၂၈ ခုနှစ်တွင် ရရှိခဲ့ပြီး၊ တရားဝင်ပုံမှန် ကျွမ်းကျင်မှု(ပရော်ဖက်ရှင်)တစ်ခုအဖြစ် မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာကို အသိအမှတ်ပြုပေးခဲ့သည်။ ၎င်းခွင့်ပြုချက် ချာတာ(အသိအမှတ်ပြုစာတမ်း)က မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာကို အောက်ပါအတိုင်း အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုသတ်မှတ်လျက် အသိအမှတ်ပြုခဲ့သည်။
နိုင်ငံတော်၏ပြည်နယ်များ၊ နိုင်ငံများတွင် အတွင်းအပြင် ကုန်ကူးသန်းရောင်းဝယ်မှုနှစ်ခုလုံးအတွက် ယာဉ်လမ်းကြောင်းထုတ်လုပ်မှုနည်းလမ်းများအဖြစ်၊ ပြည်တွင်းစီးပွားကူးသန်းရေးနှင့် ဖလှယ် လဲလှယ်မှုအတွက် လမ်းများ၊ တံတားများ၊ ရေသွယ်မြောင်းများ၊ ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းများ၊ မြစ်ရေသွင်းနှင့် သင်္ဘောကျင်းများတည်ဆောက်ရေးတွင် အသုံးပြုပြီး၊ ဆိပ်ကမ်း(ဆိပ်ကမ်းမြို့)များ၊ သင်္ဘောဆိပ်များ၊ ကုန်းများ/ကျင်းများ၊ ရေကာတာ တာရိုးများနှင့် မီးပြတိုက်များတည်ဆောက်ရေး၊ ထိန်းကျောင်းမောင်းနှင်ရေးလုပ်ဆောင်မှု၊ အစိုးရအဖွဲ့လုပ်ငန်းများ၏ အသုံးပြုမှုနှင့်တည်ဆောက်ရေး၊ မြို့ကြီးမြို့ငယ်များ၏ ရေစီးဆင်းမှုစသည့် ဖန်တီးစွမ်းအားများဖြင့် စီးပွားကူးသန်းရေးရည်ရွယ်ချက်များအတွက် လူတို့၏သက်သာစွာနေထိုင်မှုနှင့် အသုံးပြုမှုအတွက် သဘာဝ၏ထူးခြားကြီးမြတ်သည့်ရင်းမြစ်များကို ညွှန်ကြားသည့် လုပ်ဆောင်မှု ဟု အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုခဲ့သည်။
မြို့ပြ အင်ဂျင်နီယာ ဘာသာရပ်၏ သမိုင်းကြောင်း[ပြင်ဆင်ရန်]
↑ The American Heritage Dictionary of the English Language, Fourth Edition. Houghton Mifflin Company, 2004.  (accessed: 2007-08-08).
↑ History and Heritage of Civil Engineering။ American Society of Civil Engineers။7April 2016 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 2007-08-08 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Institution of Civil Engineers What is Civil Engineering။ Institution of Civil Engineers။ 23 September 2006 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 2007-09-22 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Civil engineering။ Encyclopædia Britannica။ 2007-08-09 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ What is Civil Engineering?။ The Canadian Society for Civil Engineering။ 12 August 2007 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 2007-08-08 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Oakes၊ William C.; Leone၊ Les L.; Gunn၊ Craig J. (2001)။ Engineering Your Future။ Great Lakes Press။ ISBN 1-881018-57-1။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=မြို့ပြ_အင်ဂျင်နီယာ_ဘာသာရပ်&oldid=726579" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၁ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၇:၂၀ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။